နအဖ စစ်အစိုးရက စွပ်စွဲခဲ့သလို စွမ်းအားမြင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များအ်ဖွဲ့(VBSW)က ရခ်ျဘူရီဆေးရုံ စီးနင်းမှုမှာ အဖမ်းခံရဲ့သားနဲ့ ထိုင်းစစ်တပ်က သွေးအေးအေးနဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ တကယ့်ကို ဟုတ်နေတာပဲ။
ကနေ့ စစ်ခွေးတွေကို အကြီးအကျယ်ဘောလျက်နေတဲ့ ကွယ်ထူးဝင်း နဲ့ မန်းငြိမ်းမောင်တို့ လက်ချက်နဲ့ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ စွမ်းအားမြင့် ရဲဘော်ဂျော်နီ
(၈ လေးလုံးအပြီးမှာ ထားဝယ်ကတောခိုလာတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်း သတ်ခဲ့တယ်၊ မာနယ်ပလောမှာ ABSDF က ဒေါက်တာဇော်ထွန်းကိုလည်း သတ်ခဲ့တယ်။)
သမ်ိုင်းဆိုတာဖျောက်လို့မရဘူးတဲ့…။ သိပ်ရတာပေါ့ … လောကကြီးမှာ…လူသိတဲ့သမိုင်းထက်…လူမသိတဲ့သမိုင်းက အဆပေါင်းများစွာပိုတယ်ဆိုတာကို…နားမလည်နိုင်တဲ့သူတွေပြောကြတာပါ ။ လူသိတဲ့သမိုင်းတောင် ဘယ်သူတွေရေးလို့ ဘယ်လောက်မှန်တယ်ဆိုတာ ရှိသေးတယ် ။ တကမ္ဘာလုံးက စစ်ရေးသမားတွေ…သိကြလေးစားကြတဲ့… နာမည်ကြီး တရုတ်စစ်သေနာပတိ „“ဆွန်ဇူး“ ဘယ်ပျောက် ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ အခုထိဘယ်သူသိသလဲ။ လက်တင်အမေရိက ကျူးဘားမှာ အောင်မြင်တဲ့တော်လှန်ရေး လုပ်ပြီး…ဘူလီးဗီးယားမှာကျဆုံးခဲ့တဲ့.. ချီဂွေးဘားရား ဟာ..အာဖရိကတိုက် ကွန်ဂိုနိုင်ငံလေးကိုကယ်တင်ဘို့လဲ အဲဒီမှာ တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တာ.. သူကျဆုံးပြီး နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာမှသိကြတယ် ။ ထားပါတော့......
ဒီနေ့…အမေခေါ်လိုက်..အန်တီ ခေါ်လိုက်..သမိုင်းဝင်ပုံတွေတွဲရိုက်လိုက်၊လုံခြုံရေးတွေစိုးရိမ်လိုက်…လုပ်နေကြတဲ့သူတွေ အများစုဟာ..တချိန်က“စု ” ဆိုတဲ့စကား လုံးတောင် လေသံကျယ်ကျယ်မထွက်ရဲခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီနေ့ ခွပ်ဒေါင်းကို ဦးထုပ်တမျိုး…တီရှပ်တစ်ဖုံ…ရင်ထိုးတသွယ်…ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဆင်ယင်နေကြတဲ့…ပျိုပျို အိုအိုကိုကို မမတို့ ( အဘပြောင်စ်ိန် တောင်ပါသေး ) တတွေဟာ…တချိန်က..ခွပ်ဒေါင်းဆိုရင်…ရုပ်ပုံတောင်လူရှေ့ မှာ ကြာကြာရပ်ကြည့် ရဲသူတွေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်တွေက…ခွပ်ဒေါင်းမမှေးမှိန်အောင်…နေရာအမျိုးမျိုးမှာ… ပုံပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားခဲ့ပြီး… သမိုင်းမရှိခဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ ဒီထဲမှာ(ABSDF)ကနေပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်စုဟာ..၁၉၉၉အောက်တိုဘာလထဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့က… န၀တသံရုံးကိုဝံ့ဝံ့စားစား ၀င်စီးပြီး…န၀တအလံကိုဖြုတ်ချ..ခွပ်ဒေါင်းအလံကို.. ကမ္ဘာက သတိထားမိအောင် တင်ပြီး…အခု ပြည်တွင်းမှာ… လူတွေကျယ်ကျယ်ကျယ်ကျယ် ပြောနေပြီဖြစ်တဲ့....ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ကိုတောင်းဆိုခဲ့ဘူးတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့..သူများနိုင်ငံကတောင်..လေးစားလို့…သွားလိုရာလွှတ်ပေးတဲ့သူတို့ကို… နယ်စပ်တစ်လျှောက် (A-to-Z) ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ဒီမိုတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့…ဘယ်အဖွဲ့ကမှလက်မခံခဲ့ဖူး။ ထိုင်းမြေပေါ်မှာအနေရကျပ်မှာစိုးလို့ တဲ့…. ဒါကြောင့် ကရင်ကလေးငယ်တစုဦးစီးတဲ့…ဘိတ် ၊ထားဝယ်ခရိုင်ဘက်က (God Army) တည်ရှိရာနေရာလေးတစ်ခုမှာ ခိုလှုံခဲ့ရတယ်။ (God Army)နာမည်တက်ခါစ..ကျော်ဦး (ကျော်နီ) တို့ရောက်သွားတော့..ကမ္ဘာကအာရုံစိုက်လာတယ်။ သံရုံးကိစ္စမှာ..မရှိတဲ့မဟာအရှက်တော်..ဟက်တက်ကွဲခဲ့ရတဲ့ န၀တ က…ဒီနေရာလေးကို…ခြေမှုန်းရှင်းလင်းဖို့ ကြိုးစားတော့တာပေါ့။ ရယ်စရာနဲ့ ရင်နာစရာကောင်းတာက ဒီမိုသူရဲကောင်းဆိုတာ…သူတို့သာပါလို့ ကမ္ဘာကအာရုံစိုက်စေချင်တဲ့…ပြီးတော့..အကူအညီတွေရချင်တဲ့…၊ပြီးတော့…ထိုင်းကညိုငြင်မှာကိုကြောက်တဲ့ A to Z အဖွဲ့အသီးသီးက လှစ်လျှူရှုခဲ့ကြတယ်ဗျာ။
မရှိတဲ့အရှက်တွေ…ကွဲပြီးရင်းကွဲနေတဲ့နအဖက…အဲ့ဒီ့နေရာလေးကို... …ချေမှုန်းဖို့စီစဉ်တာပေါ့။ ဒီတခါတော့…ကျော်နီတို့နဲ့ သူတို့ကိုလက်ခံတဲ့ ကရင်တွေကိုအပိုင်အပြတ်ရှင်းရအောင်…ထိုင်းနယ်မြေဘက်ကပါ ထိုင်းတပ်တွေနဲ့ ပိတ်ပြီးအပိုင်ဆော်ဖို့..အဲဒီ့ဘက်မှာရှိတဲ့ Thai Chamber of commerce စီးပွါးရေးအဖွဲ့ကြီးကတဆင့်.... ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ခွင့် ….သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ဝယ်ခွင့်..ပိုက်လိုင်းဆောက်ခွင့် တွေ..တသီကြီးမက်လုံးပြပြီး အပိုင်စီးရုံးထားခဲ့တယ်။ ၂၀၀၀ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလလယ်လောက်ကစပြီး…အဲဒီကမာပလောဆိုတဲ့ နေရာလေးကို.. နအဖ..ဘက်က… ခြေမြန်တပ်ရင်း ၇၃၅ ၊ ၃၈၀ ၊ ၅၃၉ တို့နှင့် ၀ိုင်းပိတ်ထိုးစစ်ဆင်ပြီး….ထိုင်းဘက်က တိုင်းတပ်က ၁၂၀ မမ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ထုပါလေရော။ ၁၂၀ မမတစ်လုံးကျရင်… အဲဒီ့နေရာကိုက် ၂၀၀ ပတ်လည်လောက် (ဘောလုံး၂ကွင်းစါပတ်လည်)ထိ ရောက်တာဆိုတော့..ကရင်ရွာသူရွာသား..မိခင်တွေ…ကလေးတွေ အတုံးအရုံးပေါ့ဗျာ … သတင်းထောက်မရှိ မီဒီယာတွေကလဲ မရှိတော့ ဓါတ်ပုံ ဘာညာတော့ သက်သေမပြနိုင်ဘူးပေါ့။ ကြိုးစားမှတ်တမ်းတင်ထား တဲ့ မြေပုံကြမ်းလေးကြည့်ပြီး မှန်းကြည့်ပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ…ဆေးရုံမရှိ…ဆေးဆရာမရှိ…ဆေးဝါးမရှိ…ဒါနဲ့…….
„“ညကအိပ်မရ..စိတ်နဲနဲထိလို့ ဗျာ...နားပါဦးမယ် … ဆက်ကျိုးစါးပါ့မယ်။.
(၁)သူရဲကောင်းဖြစ်မလားလို့ ..မီဒီယာကို…လိမ်ရင်း….တရားခံစါရင်းနဲ့ ပိုနီးသွားတဲ့..သီတင်းစါရှင်းပွဲ။ (၂)ဝန်ကြီးချုပ်“ချွမ်”ရဲ့ …ဗျောင်လိမ်ရှင်း…နဲ့ …နာမည်စါရင်း။ (၃) ခွတ်ဒေါင်းအတွက်ပေးဆပ်၍…အမိခွတ်ဒေါင်းထံမှ..အမျှသံ.. မကြားရသေးသူများ။
၂၄.၀၁.၂၀၀၀ နေ့ လယ်မှာ… ဗေဒါတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုသဘောတူကြောင်း…ကမာပလောကရင်ရွာစုလေးကို…. ထိုင်းဖက်ကပစ်တာတွေရပ်သွားပြီး…ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ကရင် ရွာသားတွေ…ကလေးတွေကို… နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်..ဆေးကုသခွင့်ပေးမယ်လို့…ဒေသခံထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကျေငြာခဲ့တယ်….. ၂၅ရက်နေ့မနက်၅နာရီ၃၅မိနစ်မှာ တော့… ထိုင်းကွန်မန်ဒို ၂၀၀ ကျော်ခန့်က ဆေးရုံကို..ရုတ်တရက် ၀င်ရောက်စီးနင်းပြီး..မိနစ် ၄၀ ကြာစီးနင်းမှု မှာ ဆေးရုံဝင်စီးသူလူငယ် ၁၀ ဦးလုံးတိုက်ပွဲတွင်းမှာကျဆုံးကြောင်း၊ အခြားမည်သူတစုံတဦးမျှ ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းကျေညာခဲ့တယ်။ ဝင်စီးတာကတော့..ထဝိရဲ့ အဖွဲ့ တွေပါ။ ကြေငြာပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာဘဲ ထိုင်းမီဒီယာရဲ့ သံသယအသံတွေချက်ချင်းထွက်လာတယ် .. ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ချိန် မှာ… အနီးတ၀ိုက်မှာရှိနေတဲ့ လူထုထံကလဲ…တိုက်ပွဲအားလုံးငြ်ိမ်သွားပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာမှာ…သေနတ်သံ တစ် ချက်ချင်း… ဆက်တိုက်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းမှာတော့…အ၀တ်ဖြူနဲ့ ထုတ်ထားပြီး သွေးတွေ စိမ့်ကျနေဆဲဖြစ်တဲ့..အလောင်းထုတ်တွေရယ်၊ သူတို့ရဲ့နာမည်စာရင်းရယ် ….. အသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်နဲ့ ယူနီဖေါင်းတွေရယ်ကို…သတင်းမီဒီယာကိုထုတ်ပြခဲ့တယ်။ ထုတ်ပြန်တဲ့နာမည်စာရင်းဟာ…ဗေဒါတစ်ယောက် ကလွဲရင် ဘယ်လောက်မှန်တယ်ဆိုတာတော့ ကျဆုံးသူတွေရဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဲ သိကြပါလိမ့်မယ် ။ စာရင်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် -
အမှတ် ၁၊၂ နဲ့အမှတ် ၅ တို့မှာကျောင်းသားများဖြစ်၍ ကျန်ရဲဘော်များဟာတမန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီတော့မှဘဲ…မီဒီယာရဲ့ သံသယမေးခွန်းတွေ ပိုကြီးလာခဲ့တယ်။ အဓိကက…ကတော့…… (၁)အထုတ်ဖြူထဲကအလောင်းတွေဟာ….ဒီလူတွေဟုတ်ရဲ့လား… (၂) အထုတ်တိုင်း က သွေးတွေစိမ့်ပေါက်ကျနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့…. ထုတ်ပြတဲ့ယူနီဖောင်းတွေမှာတော့ အတော်များများ ဟာ သွေးစွန်းတာတောင် မရှိတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ.. ( အချို့ ကဆိုရင်ဆေးရုံဝင်စီးသူတွေဟာ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့စစ်တိုက်ကြတာဖြစ်မယ်လို့ရိသဲ့သဲ့ ပြောခဲ့ကြတယ်)။ (၃)အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့….လူငယ်တွေရဲ့ လက်နက်တွေဟာ မပျက်မစီး အကောင်း ပကတိရှိယုံမက… ကျည်အိမ်အတော်များများကျည်အပြည့်အတိုင်းရှိနေတာ ဘယ်လိုပါလိမ့်…..ဆိုတဲ့ အမေးတွေပါဘဲ။ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာ….ဘယ်ကိုဦးတည်နေပြီဆိုတာ….လူတိုင်းနားလည်နိုင်တဲ့ အနေအထားရောက်လာတော့….ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ချွန်လိပိုင်…. ကိုယ်တိုင် ထိုင်း စစ်တပ်ဘက်က… ဗျောင်လိမ်ဗျောင်စါး….၀င်ရှင်းခဲ့ရတယ်။
ကျဆုံးတဲ့အလောင်းခေါင်းပိုင်းတွေ…မီဒီယာကိုမပြမဖြစ်ပြလိုက်ရတော့…ဝေဖန်သံတွေပိုဆိုးလာခဲ့တယ်။ လူငယ်တွေဟာ သွေးအေးအေးနဲ့ပစ်သတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်လို့…အမှန်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းဘို့ စွတ်စွဲတောင်းဆိုသံတွေထွက်လာခဲ့တယ်။ သို့ပေမဲ့လဲဘဲ….ဒီမိုကရေစီဆိုတာရှိပေမဲ့…အထုတ်ကြီးကြီးတွေပိုက်ထားနိုင်သူဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း…ဗိုလ်ချုပ်သစ်တွေ… နောက်ကွယ်ကနေသြဇာလွှမ်းသေးတဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုတော့…ဒီအဖြစ်မှာ တစ်ခါက…ကျော်နီတို့ကို နားလည်စာနာစွာ ကယ်ခဲ့တဲ့…ဒု- နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆူကွန်ဘန်း နဲ့ ဒီမိုသမားဝန်ကြီးချုပ် ချွမ်လိပိုင်တို့ဟာ… ထိုင်းစစ်တပ်ဘက်က… ဗြောင်ရပ်တည်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့…မတရားမှုကိုမတရားမှုအတိုင်းမြင်တတ်တဲ့..ထိုင်းပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်း…နဲ့သတင်းသမားတွေကတော့ အတော်ကလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ ...၊မေးခွန်းအမျိုးမျိုးထုတ်ခဲ့ကြတယ်။(နောက်ဆက်တွဲတွင်ထိုရေးသားချက် တချို့ကိုတင်ပြပါမည်) ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ စီးပွါးရေးဇာတ်ရှုတ်တွေ… မီးခိုးကြွက်လျှောက်ပေါ်မှာစိုးလို့… အရှင်ဖမ်းခံပါလျှက်နဲ့ နှုတ်ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာစစ်ရာဇ၀တ်ဥပဒေနဲ့..နီးလာတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေ ဖြစ်လာတော့…. ၀န်ကြီးချုပ် ချွမ်က… “ ကျုပ်တို့လူတွေ ၀င်စီးတဲ့အခါမှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ.. အိပ်ပျော်နေတာလဲမဟုတ်ဘူး…ကြိုးနဲ့ တုတ်ထားတာ လဲမဟုတ်ဘူး ကျုပ်တို့လူတွေက…ဒီလိုဦီးအောင်မပစ်ရင်… အခုသူတို့နေရာမှာကျုပ်တို့လူတွေရောက်နေမှာဘဲ ” လို့ ဒေါမာန်ပါပါနဲ့ သတင်းထောက်တွေကိုရှင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့မှဘဲ…ပိုဆိုးလာတယ်….။ အလောင်းတွေကို ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲမထည့်ခင်…စစ်တပ်ကမှတ်တမ်းအဖြစ် ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတချို့..သူတို့အတွင်းထဲကပေါက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဆေးရုံ အိမ်သာတစ်ခုထဲကနေ ခုခံပစ်ခတ်ရင်း ကျဆုံးခဲ့တဲလူငယ်တစ်ဦးကလွဲရင်… အားလုံးဟာ အ၀တ်အစားတွေချွတ်ထားပြီး… ချီထားခဲ့တဲ့လက်ပြန်ကြိုးတွေတောင်… တစ်ဖက်စီဘဲဖြုတ်ရသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာစစ်သုံ့ပန်း ဥပဒေတွေမှာ…ဘယ်စစ်ပွဲမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်..ယုနီဖေါင်းနဲ့ အသက်ရှင်ရက်ဖမ်းမိခဲ့ရင်…လိုက်နာရမဲ့ သုံ့ပန်းကျင့်ဝတ်တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့…သူ့အရပ်သူ့ဇာတ်…သူ့ တိုင်းပြည်… သူ့ လူတွေဆိုတော့ ဒီအဆင့်ထိမရောက်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့ ၂၆ ရက်နေ့မှာဘဲ…အဲဒီနယ်မြေကမထင်ရှားတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးတစ်ခုအတွင်းမှာ… ဗေဒါအပါအ၀င်…ကျဆုံးသူ လူငယ် ၁၀ ဦး ကိုတစ်ပေါင်းတည်း ဂူသွင်းမြုတ်နှံလိုက်ပါတယ်။အသံတွေလဲတဖြည်းဖြည်း စဲသွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က..လို..အလောင်းတွေကို မဖျောက်ဖျက်ခဲ့တာနဲ့… သူတို့နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲ ပြသနာရှိပေမဲ့…ဗုဒ္ဓ ဘာသာပီသစွာ. ....နေရာပေးလက်ခံခဲ့တာ ကိုဘဲလေးစားစရာပါ။ အချိန်တိုတွင်း လူထုကြားမှာ မှေးမှိန်သွားပေမဲ့..အိုးမလုံသူဗိုလ်ချုပ်တစ်စုကတော့… သူတို့အရှုတ်ထုတ်တွေကိုသိထားသေးတဲ့…ကျော်နီတစ်ယောက်ဘယ်ရောက်မှန်းမသိ ကျန်နေသေးတော့… စားမ၀င်အိပ်မပျော်… ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထိုင်းဘက်ကပစ်တာတွေရပ်သွားပေမဲ့…သေဆုံးသူဒါဏ်ရာရသူအများအပြားနဲ့ တဖက်…၊ဗေဒါတို့ကျဆုံးပြီး..ထိုင်းဘက်ကပြန်ပိတ်ထားလို့ ရိက္ခာမရှိ ဆေးဝါးမရှိ ဖယိုဖရဲ တဖက်.. ဖြစ်နေတဲ့ ကမာပုလောရွာစုကလေးကို…နောက်တပါတ်မှာ..နအဖ ဘက်က အလုံးအရင်းနဲ့ ချေမှုန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ထိုင်းဘက်ကျွံထွက်လာသူတွေထဲမှာ…ကျော်နီပါလာခဲ့ရင်အပျောက်ရှင်းဘို့ နယ်စပ်တစ်လျှောက်ထိုင်းတပ်တွေ အသင့်စောင့်နေခဲ့တယ်။ စစ်မျက်နှာနဲ့ ပစ်မှတ်ကျဉ်းတဲ့အနေနဲ့ … ဆေးရုံစီးတဲ့အဖွဲ့ဟာတမန်တော်တပ်(God Army )မဟုတ်ဘဲ…(VBSW)စွမ်းအားမြင့် မြန်မာကျောင်းသားစစ်သည်တော်များ အဖွဲ့သာဖြစ်တယ်လို့ ပြောင်းလဲစွပ်စွဲခဲ့တယ်။ တစ်နေရာမှာ..ကျော်နီရှိတယ်ကြားလို့ နယ်မြေကျော်ဝင်ရှင်းဘို့ ကြိုးစားကြည့်တာ ထိုင်းစစ်သား ၄ ယောက် မိုင်းထိပြီးပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။ ကျော်နီရှိနေသမျှ…သူတို့ အတွက်နောက်ကျောမလုံဖြစ်နေတဲ့ထိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်စုဟာ တစ်ခြားနည်းကိုသုံးရတော့တယ်။ အခြေအနေကို သွေးအေးအောင်ထား..နယ်စပ်ထိမ်းချုပ်မှုတွေလျှော့..ဂျော်နီထူး ၊ လူသာထူးနဲ့ တမန်တော်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကို..ထိုင်း နိုင်ငံနယ်မြေ “ထမ်ဟင်း”စခန်းထဲမှာ ကောင်းစွာလက်ခံထားပြီး ကျော်နီနဲ့ စွမ်းအားမြှင့်ကျောင်းသားများ လာရင်လဲ ဒီလိုဘဲလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့..အကြောင်း ကိုသိထားတဲ့..ကျော်နီနဲ့အဖွဲ့ဟာ ထိုင်းမြေပေါ်ကို ခြေမချခဲ့တော့ပါဘူး။ နအဖ တပ်တွေ..ကြား မြန်မာဘက်ခြမ်းတော တွင်းမှာဘဲ…ဒုက္ခပေါင်းစုံ ကြံ့ကြံ့ခံရင်း ပုန်းရှောင်ရပ်တည်နေခဲ့တယ်။ ကျော်နီဟာ..တစ်ခါကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ ဖူးတဲ့ ထိုင်းထောက်လှမ်းရေးကို… မယုံကြည်နိုင်တော့ပေမဲ့....တခါမှ မိတ်ဆွေမဖြစ်ဖူးတဲ့ကိုယ့်လူမျိုးချင်းကိုတော့…ယုံကြည်ခဲ့မိ တယ်။ အခက်ခဲပေါင်းစုံ ကြုံနေရတဲ့ ကျော်နီကို မြန်မာ့ဒီမိုအဖွဲ့ ခေါင်း ဆောင်တစ်ဦးနဲ့ ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် တစ်ဦးက.. ဘယ်လိုယုံကြည်အောင်လုပ်လိုက်နိုင်တယ်တော့မသိဘူး…. ကျော်နီဟာပုန်းအောင်းရာကထွက်ပြီး ထိုသူတွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်.. အဲဒီအချိန်ကစပြီး…ထိုင်းထောက်လှမ်း ရေးလက်ထဲရောက်..အစပျောက်သွားတော့တာပါဘဲ။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်၂ ဦးကတော့..အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နယ်မြေ (NLD-LA)က ဦးမြင့်သိန်း နဲ့ ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)က..မဟာမိတ်ရေးရာတာဝန်ခံ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်တို့ ဖြစ်ကြောင်း..သမိုင်းမှန်အတွက်စိတ်မကောင်းစွာဖေါ်ပြရပါလိမ့်မယ်။ ခွပ်ဒေါင်းကိုအရောင်တင်ခဲ့တဲ့..လူငယ် ၁၁ ဦးရဲ့ နိဂုံးကတော့ ဒါပါဘဲ ။ ကျွန်တော့တစ်ဦးအမြင်ပေါ့လေ…..သူတို့လုပ်ခဲ့သမျှ…ဖြစ်ခဲ့သမျှ တွေဟာ… ခွပ်ဒေါင်းနဲ့လဲ ဆိုင်ပါတယ်…. ရိုးသားတဲ့ကရင်လူထုတွေနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်… ပြည်တွင်းလူထု ခံစားရတာနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်…. ဒီမိုကရေစီဆိုတာနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်… မြန်မာ့ သံယံဇာတ..ကိုယ့်အိတ်ထဲကိုယ်ထဲ့ကြတဲ့ မြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့လဲ ဆိုင်ပါတယ်။ ခေတ်မှီအောင်ပြောရရင်..အခုပြောနေကြတဲ့ ပြည်ပမှာအပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ၁၁ ဘီလီယံ ရဲ့ အစနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်…သူတို့ကျဆုံးသွားကြပါပြီ။ သူတပါးမြေပေါ်မှာ…မိဝေးဖဝေး..အပေါင်းအသင်းမရှိ..သမိုင်းပျောက်ပြီးရော.. မြှုပ်နှံခံခဲ့ရတာမို့…...........မိတ်ဆွေတို့ အကြောင်းကြောင်းနဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလေးများလုပ်တဲ့အခါ….တိုးတိုးတိတ်တ်ိတ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ….. “သူတိုဘို့လဲအမျှဝေပါ”….. “သူတိုဘို့လဲအမျှဝေပါ”…. “သူတိုဘို့လဲ အမျှဝေပေးပါ”။။။။။
ညနေပိုင်းကျနော့ရဲ့ နေစဉ်အပုတ်ချိန်..လေးမရောက်ခင်.. ဗေဒါတို့ ကျဆုံး…မြှုတ်နှံခဲ့တာ..တလပြည့်တဲ့နေ့ ..သတိရတာနဲ့ …မဲဆောက်မြို့ ..အနောက်ဖက်အထွက်… .မယ်တော်.နဲ့ …ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြား… လမ်းဘေးအတွင်းနဲနဲကျ... လူရှင်းတဲ့ဘုန်းကြီကျောင်းတခုကစေတီလေးမှာ..မီးပူဇော်..ဝတ်ပြုရင်း.. တရားသောစစ်တို့ ..သမိုင်းမှန်တို့ ဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့ စဉ်းစါးနေမိတယ်… .နောက်မှအမျှဝေဖို့ လုပ်နေတုံး…. နောက်ကဘော်ဒါလိုက်လာပြီး…. “ဟေ့လူကြာလှချည်လား..ဟိုမှာစေါင့်နေကြတယ်…ပွဲလုပ်မလို့ အကြောင်းပေါ်ပြီ… ကုန်ဖို့ ပြင်တော့… ဟိုကောင်တွေကို…ဟိုကောင်တွေလာခေါ်သွားပြီ… ခုဘဲသီတင်းရောက်တယ်…ရက်စိ..ကွက်တိဘဲ”…တဲ့။
ထူးတော့ထူးဆန်းသား…. တိုက်ဆိုင်မှုဘဲခေါ်ရမှာပေါ့။ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၆ ရက် ..ထိုင်းတပ်မ ၉ ကတပ်မှူးဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အရာရှိများ စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့.... bell212စစ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးဟာ…အဲဒီကန်ချနဘူရီ ဒေသထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မနီးမဝေးမှာဘဲပျက်ကျခဲ့ပါတယ်။ ပါဝင်သူ ၁၁ ယောက်လုံး…အလောင်းမမှတ်မိအောင်သေဆုံးခဲ့တယ်။ ပျက်ကျတဲ့ရဟတ်ယာဉ် ဟာ… အမှီးပိုင်းကလေးကလွဲလို့ အစအနကလေးတွေဘဲကျန်ပါတယ်။ ထိုင်းစစ်တပ်ဖက်က…ရဟတ်ယာဉ်ဟာ..ရာသီဥတု ဆိုးဝါးလို့ ပျက်ကျခဲ့တာလို့ ထုတ်ပြန်ကျေညာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ Bell ကုမ္ပဏီကတော့ ထိုစဉ်ကထိုဒေသရာသီဥတုအခြေအနေကိုလေ့လာပြီး.. သူတို့တည်ဆောက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ နည်းပညာဟာ ဒီလောက်ရာသီဥတု မျိုးနဲ့… ပျက်ကျနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့…တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်။ တကယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့…ခုထိဘယ်သူမှ အသေအချာမသိ နိုင်တော့ပါဘူး။ သေချာတာတစ်ခုကတော့…အဲဒီနေ့ ဟာ…ဗေဒါနဲ့ လူငယ်၁၀ဦးကို ဒရောသောပါး ဂူသွင်းမြှပ်နှံ လိုက်တဲ့ နေ့ တစ်လရက်လည်တဲ့နေ့။ နေရာက… အဲဒီနယ်မြေထဲမှာ။ စွမ်းအားမြင့်ကျောင်းသားတွေ ဘက်ကကျော်နီအပါအ၀င် ၁၁ ယောက်….. အခုထိုင်းကလဲ ၁၁ ယောက်။ ပြီးတော့…ထိုင်းအမှတ် ၉ တပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ် စံချိုင်းနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အရာရှိအားလုံးဟာ… ဗေဒါတို့ကို ၀င်ရောက်စီးနင်းသတ် ဖြတ်တဲ့အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့ သူတွေပါဘဲ။ အဲ….အဲ့ဒီနေ့ က…ဝေတော့မဲ့အမျှကို…ကျနော်မဝေခဲ့ဘူး…သူတို့ မြေပေါ်မှာဆိုတော့…မတော်တဆ…ဟိုကောင်တွေအရင်ရသွားမှာစိုးလို့် ။ အဲ..မိတ်ဆွေတို့ လဲ….မဝေချင်နေ ကြပေါ့ဗျာ။
BY - Maung Kyaw
Posted by Myo Lwin Aung at 8:10 AM
Labels:အတိတ်က မြိတ်သမိုင်း ABSDF အေဘီ တောင်ပိုင်း, ABSDF အေဘီ မြောက်ပိုင်း, အောက်မေ့ဖွယ်